चलचित्र घामपानी समीक्षा | Hamro Patro
सिनेमा आर्ट प्रोडक्सनको ब्यानर यो बर्षको पहिलो ठुलो रिलिज घामपानी यो शुक्रवार नयाँ बर्षको उपलक्ष्य पारेर देशभरको सिनेमा घरमा प्रदर्शनमा आएको छ । दयाहांग राइ , केकी अधिकारी स्टारर यो चलचित्रलार्इ लामो समयदेखि चलचित्र समीक्षा गरिरहेका दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेका हुन् । थप अरु दुइ चलचित्रसंग एउटै मितिमा प्रदर्शनमा आएको यो चलचित्रलार्इ कडा टक्कर छ , यस्तो मा के यो चलचित्रले दर्शक को मन जीत्न सफल हुन्छ त , जानौ चलचित्र घामपानीको समीक्षामा ।
तामांग केटा दयाहांग राइ आफ्नो गाउँमा शिक्षक छन् , उनको सानैदेखि आफ्नै छिमेकि ब्राह्मण केटी केकी अधिकारीसंग प्रेम छ । केकी बीचमा काठमाडौं पढ्न गएकी छिन् , केहि बर्ष पछी उनि गाउँ फर्किन्छीन र दयाहांग र केकीको प्रेम सरलतासंग अगाडी बढ्छ । यी दुवै पात्रका बुवाहरु जात नमिले पनि निक्कै घनिष्ठ मित्र हुन् तर पनि आफ्नो छोरा छोरिको बिबाह गराइदिने पक्षमा हुदैनन् । त्यसपछि त्यहि गाउँमा एक जना असई अंकीत खड्का आइपुग्छन , उनको आँखा केकीमा पर्छ र अब उनलाई केकीसंग बिबाह गर्ने इच्छा जाग्दछ । के अंकित ले दयाहांग र केकीको प्रेम सम्बन्ध बिगार्न सक्छ त ? अंकितसंग बिबाहको कुरा सुरु भएपछी उनको र दयाहांगको सम्बन्ध कसरि जोगाउछन त ति दुवै मिलेर ? छोरा छोरिको प्रेम नरुचाएका दुर्इ घनिष्ठ मित्रको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त? यी सबै कुराहरुहो उत्तर यहाँहरुले चलचित्र घामपानी हेर्दा थाहा पाउनुहुनेछ ।
कथा , पटकथा र संवाद
चलचित्रको लेखन निर्देशक दिपेन्द्र लामा कै हो । उनको भिजन क्लियर छ । उनि एउटा गाउँठाउको सरल प्रेम कथा बनाउन चाहन्छन । उनको कथा पनि त्यहि कारणले निक्कै सरल छ । पटकथा निकै अव्वल छ , कथा जतिक्कै सरल छ , तर दोस्रो हाफको बीच तिर अलिकति कथा जम्प भएको महसुस हुदछ । उनको कथामा पृथकता छैन , न त पटकथा मा नै । तर जे छ मीठो छ . चलचित्र हेरुन्जेल दर्शकको अनुहारमा मन्द मुस्कान रही रहन्छ । कतै कतै थोरै बोरिंग लाग्न थालिहाले पनि त्यस पछीको दृश्यमा केहि रमाइलो आइहाल्छ र दर्शकको चलचित्र हेर्ने इच्छा बनिरहन्छ । संवाद चलचित्रको अव्वल छ । पुरानो डुंगा , कब्बडी सिरिजको फ्लेवरका संवादहरुले फेरी पनि दर्शकको मन जित्छ ।
दयाहांग राइ सदाझै अव्वल छन् , पर्फेक्ट छन् । जति सरल यो चलचित्र छ त्यति नै सरल उनको अभिनय पनि । केकी अधिकारी पनि उत्कृष्ट छिन । दयाहांग र केकीको केमिस्ट्री मजबूत भएकाले पनि दर्शक एउटा सरल कथामा बाधिएर बस्नेछन् । त्यसबाहेक चलचित्रमा अंकित खड्का छन् र ऊनको अभिनय पनि तारिफ योग्य छ । प्रकाश घिमिरे र पुस्कर गुरुङ बीचको केमिस्ट्री चलचित्रको मुख्य आकर्षण बनेको छ । खास गरि प्रकाश घिमिरेले फेरी पनि आफ्नो छाप छोडेका छन् यो चलचित्र मार्फत । बाकि सबै सहायक कलाकारहरुको काम उल्लेखनीय छ ।
प्रावीधिक रूपमा निक्कै अव्वल छ चलचित्र घामपानी . सैलेन्द्र कार्कीको छायांकन , निमेष श्रेष्ठको सम्पादन र ब्याकग्राउण्ड म्युजिक सबै १ नम्बरका छन् । बाकि रह्यो संगीतको कुरा , काली प्रसाद बास्कोटाको पन्छीले मन छुन्छ , खासगरी एनडींगमा यो गीतले मीठो प्रभाव पार्दछ । त्यसबाहेक चन्द्र कुमार डोंगको आपालाई मेरो बोलको तामांग सेलो गीत नि उत्कृष्ट छ ।
दिपेन्द्र लामाले आफ्नो पहिलो चलचित्र बात राम्रो प्रभाव पार्छन । साधारण कथा प्रस्तुत गर्दा समेत उनको चलचित्र हेरेर कोहि बोर हुदैन .। कलाकारलार्इ मज्जाले प्रस्तुत गरिएको छ । उनले चलचित्र घामपानीलार्इ न्याय दिएका छन् ।
घामपानी एउटा सरल चलचित्र हो , गाउँठाउँको सरल कथाबस्तु बोकेको यो चलचित्रबाट खतरा ट्वीस्ट अपेक्षा राख्न सकिदैन । सादा जीवन उच्च बिचार भनेझैँ यो चलचित्र पनि सरल कथा उच्च स्तरको प्रस्तुति भएको छ । यदि तपाईहरु पुरानो डुंगा , कबड्डी र कबड्डी कबड्डी जस्ता चलचित्र हेर्दा रमाउनु हुन्छ भने घामपानी अवस्य तपैहरुको लागि उचित हुनेछ ।